कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा सार्ने देउवाको तयारी - नेपालबहस
कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा सार्ने देउवाको तयारी
| १४:०२:४९ मा प्रकाशित
२५ भदाै, काठमाडौं । संसदीय निर्वाचनमा धोबी चुटाई पाएको नेपाली कांग्रेस त्यसपछि भने सुध्रने आम अपेक्षा थियो ।०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनको नतिजा कांग्रेसका लागि मात्र नभई आम लोकतन्त्रवादी कै लागि शर्मलायक थियो ।धेरैले सोचेका थिए :– अब कांग्रेस नेतृत्वले गल्तीबाट पाठ सिक्नेछ । केन्द्रीय कार्य समितिलगायत जिल्ला कार्य समितिहरुले समेत अर्ली महाधिवेशनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् ।
तर परिणाम उल्टो देखियो । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचनमा भएको पराजयको अपजस लिन तयार भएनन् । बरु संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न अग्रसर भए । सत्ता र शक्तिका लागि देउवाले धेरैपटक पार्टीमाथि घात गरेका छन् । चाहे त्यो राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर संंसद विघटन गर्दा होस् वा भरतपुरको मेयर जिताउन कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाएर होस् देउवाले कांग्रेसको हुर्मत लिएका छन् ।
नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहाललाई भतरपुरको मेयर जिताएर देउवाले आफ्नो पद केही समयका लागि जोगाए होला तर चितवनका कांग्रेसले स्वाभिमान गुमाए । त्यसैको प्रतिफल थियो– आम निर्वाचनमा राप्रपा उम्मेदवारलाई मतदान । यी दुबै निर्वाचनबाट भरतपुरका कांग्रेसले आफ्नोपन गुमाएका थिए । अब चितवनमा कांग्रेसलाई रुखमै भोट हाल्न देउवाले फरमान जारी गर्ने नैतिक हक बाँकी छ त ?
प्रसिद्ध फ्रेञ्च लेखक स्वेट मार्डेनको पुस्तक “गो अहेड “ अर्थात अगाडि बढमा लेखिएजस्तै राम्रो गर्ने राजनीतिक दलले पछाडि फर्कंदैन । अर्थात, सधैं अगाडि मात्र बढ्छ । समयको चाप बुझ्ने नेतृत्वले मात्रै पार्टीलाई सही दिशा दिन सक्छ । उक्त भनाई नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका हकमा उल्टो छ । उनी अग्रगामी हैन पश्चगामी सोचमा विश्वास गर्छन् । पद र सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न उनी पछाडि पर्दैनन् । इतिहास साक्षी छ, देउवाले कांग्रेसलाई मात्र नभई देशलाई नै भड्खालोमा जाकेका छन् ।
रमाइलो त के छ भने कांग्रेस कार्यकर्ता पनि दास प्रवृत्तिका छन् । आजका युवापुस्ता आफूलाई सक्षम सम्झन्छ, तर विद्रोह गर्ने आँट छैन । बरु देउवा, पौडेल र सिटौला दाईको पछाडि लागेर आफूलाई सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ । यो त कांग्रेसको संस्कार नै भयो ।
कांग्रेस पद्धतिबाट हैन नेतृत्वबाट चल्छ । ००७ सालदेखि नै कांग्रेसमा पद्धतिभन्दा नेतृत्व हावी भएको देखिन्छ । केवल ०१५ देखि ०१७ सालसम्म बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पद्धति बसाल्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ । तर ०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले बीपीको सरकार अपदस्थ गरेकाले त्यो पनि बीचैमा अबरुद्ध भयो । त्यसपछिको पञ्चायती शासनकालमा त प्रतिवन्धित पार्टी भएकाले विधि र पद्धतिका कुरा गर्नु व्यर्थ थियो ।
०४६ सालपछि पुनस्थापित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई समुन्नत बनाउन कांग्रेसले राम्रो अवसर पाएको हो । नेपाली नागरिकले कांग्रेसलाई पटक पटक बहुमतको सरकार बनाउने मौका दिएका हुन् । तर नेतृत्वकै अकर्मण्यता र लोभपापले गर्दा अवसर त्यसै गुम्यो । फेरि पार्टी भित्रको अन्तर्कलहले सबै तहसनहस नै बनायो । किसुनजी, गणेशमानजी जस्ता त्यागी नेताले यो पार्टी जीवनको उत्तरार्धमा त्याग गरे । तर कसैले उनीहरुलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएनन् । बरु सत्ताकै वरिपरी आफुलाई सुरक्षित बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गरे ।
त्यो क्रम पछिल्ला दिनमा अझै झाँग्गिएको छ । देउवा नेतृत्वमा पार्टी र सरकार दुवै सधैं बदनाम भए । त्यसको पछुतो देउवामा रत्तिभर छैन । बरु फेरि पनि पार्टी सभापति जसरी भएपनि बन्छु भनेर उनको सारा शक्ति केन्द्रिकृत भएको छ । सत्तामा हुुँदा मात्र हैन, प्रतिपक्षमा रहँदासमेत शक्ति खेलाउन पाएका देउवासँग असीमित पैसा र पावर छ । त्यसैले आउने महाधिवेशनमा उनलाई पराजित गर्न सानोतिनो शक्तिले काम गर्नेवाला छैन् ।
पोहरसाल नै चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी फागुनमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने तालिका बनाएको छ । देउवा भने कार्यकाल समाप्त भइसकेको पार्टी संगठन र भातृ संस्थामा मान्छे भर्ने काम गरिरहेका छन् । अब एक कार्यकालका लागि देउवा आफैं सभापति बन्ने कसरतमा छन् । त्यही प्रयोजनका लागि विधानले ६ महिना भित्र गरिसक्न भनेको मनोनयन यतिबेला गर्दैछन् । तैपनि उनी सकेसम्म महाधिवेशन नहोस् नै भन्ने चाहन्छन् । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका बेला फागुनमा पनि महाधिवेशन गर्न सहज छैन । त्यसैले उनी आगामी भदौसम्म सार्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले संकेत गरिसके । हिजै मात्र बीपी जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले फागुनमा महाधिवेशन गर्न सहज नभएको बताए । तर मिति सार्न चाहिं आफैं प्रस्ताव नगर्ने उनको भनाई छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई नजिकको बलियो भएपनि जनस्तरमा अलोकप्रिय छ । जनता कम्युनिष्टलाई भोट दिएकोमा पछुताउ गरिरहेका छन् । विकल्पमा फेरि कांग्रेस नै सत्तामा आओस् भन्ने आम नेपालीको चाहना छ । तर देउवाको नेतृत्वमा जनता परिचालित हुने अवस्था छैन । आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेसको सारथी नयाँ पुस्ताले गरोस् भन्ने आम नागरिकको चाहना छ ।
तर देउवाको हरकत हेर्दा त्यो अवस्था सहजै आउला भन्ने लाग्दैन । जसरी भएपनि पार्टीको नेतृत्व हत्याउने देउवाको प्रयत्नलाई निस्तेज बनाउने मूल जिम्मेवारी युवा पुस्ताको हुनुपर्ने हो । तर कांग्रेसमा रहेको युवा पुस्तामा त्यो साहस अझै पलाएको छैन । त्यसैले फेरि पनि नेपाली जनताले चाहे अनुसारको राजनीतिक परिपर्तनको सम्भावना दुरुह बन्दै गएको छ ।
आज नेकपाकाे सचिवालय बैठक बस्दै ३ हप्ता पहिले
यसरी लाग्दैछ माधव नेपालको अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा ताल्चा ४ हप्ता पहिले
केपी र प्रचण्डबीच हुने भनिएको छलफल अन्तिम समयमा स्थगित १ महिना पहिले
नेकपामा अस्थायी युद्धविराम १ महिना पहिले
आज नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै १ महिना पहिले
चेन्नेईविरुद्धको जितसँगै दिल्लीले आईपीएल जित्न सक्ने ३ आधार १ घण्टा पहिले
माइक्रो बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु १ घण्टा पहिले
विश्वभर खोप पत्ता लाग्नुअघि संक्रमणबाट २० लाखकाे मृत्यु हुने १ घण्टा पहिले
ललितपुरमा रक्सीको विज्ञापन गरिएका होर्डिङ बोर्ड राख्न प्रतिबन्ध २२ घण्टा पहिले
पटके कर लगाएर तीव्ररुपमा बालुवा व्यापार, स्थानीय तह माैन ! २२ घण्टा पहिले